Njikwa valvụ -
Njikwa VOLVES - SINGER
NKWU ALLỌ - NLERE 106/206-PR RELUCUTION VALVE
Nrụgide na - ebelata valvụ dị mma maka ijigide nrụgide dị n'okpuru valvụ ahụ. Valvụ ahụ na-anabata nrụgide sistemụ na-agbadata na njikọ dị na mpụga valvụ na usoro pilot nke na-aza obere mgbanwe nrụgide na-agbanwe ọnọdụ nke valvụ ahụ site na ịmegharị nrụgide ahụ n'elu diaphragm.
Na-enwe nrụgide ziri ezi n'okpuru valvụ ahụ
Ọ na-eme ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma
NKWU TRLỌ - NLERE 106/206-PR-48 NTEDR V MMA
Nrụgide ikike mbugharị na-ebelata valvụ maka obere asọfe bụ nrụgide aka na-ebelata valvụ na nje dị ya, ezigbo maka ngwa nwere mgbochi. N'okpuru ọnọdụ ọnọdụ adịghị ala, valvụ ahụ na-emechi emechi ma na-agagharị agagharị na-emeghe, na-achịkwa nrụgide ruo na ntopute efu n'enweghị ihe ọ bụla na-akpata oche.
Ọ na -eme ka mmiri kwụsie ike ruo na efu
Ntọala nrụgide dị mma ma nwee ntụkwasị obi
Zuru okè maka nrụnye mkpọda ugwu dị elu